Banyere Anyị - Hebei Kenuo Rubber Products Co., Ltd.
nke mbu guzobere na 1994, ya na ndi oru isi ole na ole. yana mmepe, etinyere ya na ulo oru morden. Isi ndebanye aha bụ 5 nde RMB, nke dị na Xinle City Economic Development Zone ma kpuchie ebe 26668 square, isi ụlọ na-agụnye R & D ụlọ, multifunctional ụlọ ọrụ ụlọ, mmepụta ogbako, ngwaọrụ nkwakọba, okokụre ngwaahịa nkwakọba, ike nkesa ụlọ, ekesa tankị mmiri, ọkụ mmiri tank na ndị ọzọ na ancillary ụlọ ọrụ. Companylọ ọrụ anyị nwere ngụkọta nke mmadụ 118, gụnyere ndị ọrụ nchịkwa 5 dị elu, ndị ọrụ mmepe ngwaahịa 3, ndị ọkachamara 7 ọkachamara, ndị ọrụ mmepụta 103 na ndị ọzọ. Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ngalaba, usoro njikwa ahazi, usoro ọrụ zuru oke yana usoro ọrụ ndị ahịa dị mma, nke na-enye nkwa siri ike maka mmepe ngwaahịa, mmepụta, ogo, ahịa na ọrụ ahịa ahịa ahịa wdg.
Isi azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ mmepụta, nhazi na ire ngwaahịa ngwaahịa akpụkpọ ụkwụ, ngwa plastik, ngwaahịa robana ngwaahịa plastik. Arụpụta n'ọtụtụ, enweghị ezigbo ike ịhapụ ngwa ọrụ dị elu yana nrụpụta dị elu, na Kenuo Rubber tinyere ego na ntinye na ntinye onwe ya na imepụta ọtụtụ usoro mmepụta. Companylọ ọrụ ahụ nwere usoro atọ nke usoro mmepụta nke SJZ80 / 156 ụdị resin na-emepụta sịntetik na ụdị 12 nke ntinye ịkpụzi mmepụta nke eriri slippers plastik, nke nwere ike nweta mmepụta kwa afọ nke 75000 square mita nke mpempe akwụkwọ foto nke fotovoltaic pụrụ iche, 1.8 nde square mita nke sịntetik. resin tile, 300 puku square mitaakwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ robana nde 12 nke slippers rọba. Kwa afọ mmepụta uru bụ yuan 266.
The sịntetik resin tile arụpụtara na anyị ụlọ ọrụ nwere àgwà nke mgbochi ịka nká, mgbochi ibu, corrosion eguzogide, okpomọkụ mkpuchi, ọkụ retardant, mkpuchi, ike ịzọpụta na gburugburu ebe obibi-echebe, nke e ọtụtụ-eji na ewepụghị na-mkpọda engineering, ebe obibi ime obodo ọhụrụ, ụlọ nzukọ na ebe obibi ndị ọbịa, ebe nkiri dị n'ụdị ndị ochie, carport na ụgbọala, ụlọ ọrụ na ebe a na-egwupụta akụ, acid na osisi alkali na-eguzogide ọgwụ, ụlọ nchebe nnu na oke osimiri na ebe ndị ọzọ, nke bụ ezigbo ihe maka ụdị niile nke na-adịgide adịgide ụlọ ji achọ ụlọ na waterproof. Mmepụta Kenuosịntetik resin tile na-eduga nhazigharị ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ taịlị, nke na-azatakwa iwu nchedo gburugburu ebe obibi nke obodo carbon dị ala na nguzobe nke nchekwa nchekwa obodo.
A na-egosipụta ngwaahịa akpụkpọ ụkwụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara site na imepụta pụrụ iche, ụdị zuru oke, ịdị mma kwụsie ike, nkasi obi na ịma mma, nchekwa ahụike na gburugburu ebe obibi, nke nwere ugbu a EVA, PE, PVC, plastic, roba-plastics slippers, sandals, slippers, beach shoes , slippers, slippers ime ụlọ ịwụ, slippers na họtel, slippers katuunu, akpụkpọ jelii, slippers di na akwa EVA. Companylọ ọrụ ahụ edebanyela aha "Home Baby" na "Jianmeida" ụdị, nke mere ka ọhụhụ ngwaahịa dị mma na uru azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ.
N’April 2014, ụlọ ọrụ ahụ debara aha ma rụọ ọrụ Taobao nnukwu ụlọ ahịa, nke mere ka ọwa ahịa dịwanye elu, jikọtara ya na ndị ahịa ahụ ozugbo, ghọta nke ọma mkpa ndị ahịa mgbe ha ghọtara ogo ahịa ma guzobe ezigbo mmekọrịta ndị ahịa. Networklọ ọrụ ntanetị nke ụlọ ọrụ ahụ karịrị ihe karịrị mpaghara 20 na obodo na mpaghara ndị kwụụrụ onwe ha gburugburu mba ahụ, ma nwee ọmarịcha aha na ahịa ahụ. Mgbe ị na-emezi ahịa ụlọ, na-arụsi ọrụ ike na-enyocha ahịa mba ụwa, na February 1, 2013, ụlọ ọrụ ahụ nwetara akwụkwọ ndebanye aha nke ngalaba nkwupụta omenala nke Republic of the people mgbe nyochachara (ntinye akwụkwọ ndebanye aha ndị ahịa: 1301965360); na Ọktọba 2014, ụlọ ọrụ anyị kwadoro dị ka onye otu ahụ wee nweta asambodo ndị otu site na Chamberlọ Ọrụ Azụmaahịa nke China maka Mbubata na Mbupụ nke Ngwaahịa Ngwaahịa na Ọkachamara-Ọrụ (Asambodo Nke 03140021). Jiri ike gbasaa ahia mba ofesi, ka ngwaahịa Kenuo wee nwee ike ichu ụwa.